Akụkọ - Akwụkwọ nke International Technology Exhibition Invitation
Akwụkwọ 27th anụ ahụ International Technology Exhibition
A ga-enwe na Nanjing International Expo Center site na 24 ruo 26 Septemba
Anyị ji obi gị niile na-akpọ gị ka ị bịa ma na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ aka.
Gaa na teknụzụ akwụkwọ ụlọ.
OK ụlọ ntu nọmba
Lọ 7, 7S39
● OK Mmalite Okwu Company
Jiangxi OK Science and technology co., LTD. Bụ elu-tech ụlọ ọrụ nke specializes na r & d na n'ichepụta ezinụlọ akwụkwọ nhazi mmepụta akara, nkpuchi akpaka mmepụta akara, na elu-ọsọ akwụkwọ igwe，na ẹdude factory ụlọ ebe nke 340000 square mita, iji ebe bụ 18000 square mita, 800 mkpara, mechaa ISO9001 mba quality usoro asambodo na European Union OA asambodo.
OK Enterprise 's concept is "Nkwenye sitere na ọkachamara ọkachamara; ntụkwasị obi sitere na mma zuru oke" na nkwenkwe anyị bụ "Ogo dịkwa mma; Ahịa Kasịnụ ”. OK Enterprise wuru usoro ọrụ dị irè ma jikọtara ya ma nye ndị ahịa ọrụ klaasị mbụ site na nyocha teknụzụ, ngwaahịa na-ahọrọ ịwụnye ma gbanwee, ọzụzụ teknụzụ na nlekọta mmezi.
01 Ngwaahịa Star
OK-120 High Speed ​​Square anụ ahụ Production Line
Gba ọsọ ọsọ: 3000 Ibé akwụkwọ / min
Mmepụta akara nwere ike na-emepụta ma 1/4 n'ogige atụrụ akwa nhicha na 1/6 n'ogige atụrụ akwa nhicha iji zute dị iche iche mkpa nke Chinese customers.The mmepụta akara adopts servo mbanye, ezi ọnụ akara akara, na ike na-emepụta 20 ~ 50 iberibe / ngwugwu ngwaahịa, ma ọ bụ ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ. Ọ na-onwem na multi-oyi akwa stacking ọrụ premade akpa bundling mbukota igwe, nke nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke dị iche iche ahịa ọwa, na nwekwara ike jikọọ na anyị ụlọ ọrụ akpaka ikpe Packer maka production.The dum akara ọrụ dị mfe, mgbanwe na-adaba adaba .
02 Ngwaahịa Star
OK-3600/2900High Speed ​​Ihu anụ ahụ Auto ịkpakọba Production Line
Speed: 200meter / min ma ọ bụ 15 ndekọ / min
Usoro mmepụta ihe dị elu nwere ụdị abụọ: obosara 2900 mm na 3600 mm, yana njikwa servo zuru ezu, ọkara nke mbụ na-anabata usoro adsorption agụụ. A kwadebere ya na igwe mpempe akwụkwọ ọtụtụ-lanes, igwe na-agba ọsọ ọsọ nwere ike iru 200 m / min ma ọ bụ 15 ndekọ / nkeji, akara ahụ niile na-ewepụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na otu ngwugwu ngwugwu na-echekwa, kesaa. a na-edozi eriri ahụ dum na igwe ihu igwe zuru oke, igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ngwugwu zuru ezu, ma nwee ike dakọtara na ngwaahịa na ngwaahịa E-commerce, ikike kwa ụbọchị nwere ike iru 30-50 tọn. Nwere ike họrọ na anyị elu-nkenke akpaka calendaring, embossing, gluing lamination unit maka mmepụta nke dị iche iche embossed ngwaahịa, kichin towel ngwaahịa, izute iche iche mkpa nke ahịa
Ihe magburu onwe ya ọdịnaya, anyị ga-akpọsa na ngosi
Mmadụ Bịa ka anyị ụlọ ndò
Lọ 7 7S39
Aka na aka gi
Mepee ọhụrụ oge maka akwukwo ulo
On ọrụ ntanetị saịtị：
【OK ụlọ ọrụ panorama】
【OK Companylọ Ọrụ Mmepụta OK Video】